ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတော့ ၀ယ်လိုက်ပါ
သူများကတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ မျက်နှာနဲ့မခွာတာ တစ်နေကုန်ဘဲ
အရမ်းချစ်တာ ဒါကြောင့် ၂လုံးတောင် ၀ယ်ချင်တာ
လောလောဆယ် ကျနော့ acer က လေးလံနှေးကွေး နေပြီဖြစ်သောကြောင့် ဘလော့ဂါအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ရင်းနှီးမှုရှိသူများအား ကွန်ပြုတာ အသစ်ဝယ်ရန် အလှူခံဖို့အစီအစဉ်ရှိပါကြောင်းဗျိုး... ကဲ အစ်မ .... အစ်မ ဆီက စမယ်... ပြောဘယ်လောက် လှူမတုန်းဗျ :P
ရေးသူသည် crystal မဟုတ်ပါ... ဟီဟိ။ အလုပ်များအပြင် လက်ဒဏ်ရာနှင့် မအားမလပ်ဖြစ်နေသော crystal နေရာတွင် သူမ၏ အမျိုးသား အိမ်ဦးနတ်မှ ကြားဝင်ဧည့်ခံပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်နာပျောက်မှ ပိုစ့်တွေ ရေးတော့မယ်နော်။ လာလည်ကြလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဟုတ်လား... ? ကြွာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ... ချစ်လွန်းလို့ပါ ရုံးခန်းထဲမှာ တစ်လုံးနဲ့ တစ်နေကုန်။ ဂိုဒေါင်ထဲထွက်ရင် လက်တော့ပ်တစ်လုံးနဲ့ လုပ်။ ညအိပ်ယာဝင်ရင် ကုတင်ဘေးမှာ တစ်လုံးထားပြီး စာဖတ် တရားနာ.. ကဲ အပြင်သွားရင်လဲ ယူသွားသေးသဗျာ.. ကွန်ပျူတာဆိုရင် တစ်လုံးမဟုတ်ဘူး. ဒစ်စတော့ရော လက်တော့ရော ၀ယ်ထားလိုက်။ ဒါမှ ကလိလို့ကောင်းတာ။သေရင်တောင် ဟိုတစ်လောက တရုတ်လေးလို သေမလား စဉ်းစားတယ်။
ပုံ မမြင်ဖူးလို့ မူးမြစ်ထင်တဲ့
ဒီဆောင်းပါးက ဂျပန်မှာထုတ်တဲ့ မြန်မာဂျာနယ်တစ်ခုအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးရေးလိုက်တာမို့လို့ အွန်လိုင်းသုံးနေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တော့ အကြောင်းအရာက ကလေးကလားလိုဖြစ်နေမှာမို့ သည်းခံပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
ဘာရယ်........ အလှူခံလာမှ လူဂျီးတွေ မရှိဘူးတဲ့လား.. ဟွန်း
ရဟန်းဒကာမကြီးကို ပြောရအုံးမှာ၊ နောက်တစ်ခါ ရဟန်းခံရှင်ပြုလုပ်ရင်၊ ပရိက္ခရာ ၉ ပါး စုံပါစေလို့၊ တစ်ပါးက ကွန်ပျူတာ၊
ကဲ... မှတ်ကရော.... ဆရာတော်မိန့်တော်မူသွားတယ် .. ဘာတတ်နိုင်သေးဒုန်း :D :D :D